प्रिज्मा-प्रिन्सी प्रेम पि:डा सम्झेर धेरै रोए | अमर अमृतसँग सम्बन्धको वास्तविकता यस्तो ! (भिडियो हेर्नुहोस्) – Ap Nepal
काठमाडौ । कलाकार सागर लम्सालसंग प्रेममा परेको चर्चामा रहेकी प्रिज्माले आफुले प्रेममा सम्मान नपाएको बताएकी छन् । बलेसंगको व्रेकअपको चर्चा सुरु भएसंगै उनको यस्तो अभिब्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको छ ।
उनले आफ्नो अभिब्यक्तिमा सागरको नाम त लिएकी छैनन् तर आफुले अब कुनै बेला प्रेममा रहेका ब्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी घृ णा गर्ने पनि बताएकी छन् । उनले आफुले जस्तै अरु कसैले पनि आफ्नो प्रेमीवाट सम्मान नपाएको अवस्था छ भने त्यस्तो ब्यक्तिवाट टाढा जान सुझाव पनि दिएका छन् ।
टीकटकबाट उदाएकी प्रिज्मा र भद्रगोल टिभी सिरियलबाट आएका बले केही वर्षदेखि प्रेममा रहेको चर्चा चुलिएको थियो । उनीहरुले यसवारे सार्वजनिक अभिब्यक्ति पनि दिएका थिएनन् । प्रेम होइन भनेर पनि भनेका थिएनन् ।
तर सामाजिक संजाल टिकटकमा उनीहरुले संगै बनाएका धेरै भिडियोहरु छन् । उनीहरुले धेरै म्युजिक भिडिओ पनि सँगै गरेका थिए । फागुनमा बिहे गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको थियो । तर फेरी अचानक उनीहरुको ब्रेकअप भएको खबर बाहिरियो ।
प्रायः सामाजिक संजालमा सँगै देखिने उनीहरु पछिल्लो समय भने एकअर्कासँगको भिडिओ पोस्ट गरेका छैनन् । उनीहरु म्युजिक भिडिओमा पनि सँगै देखिन छाडेका छन् । उनीहरु अहिले अलग भएको जनाइएको छ । स्रोतले बिहेको कुरा नमिल्दा स म्बन्ध मा दरार आएको दावी गरेको छ ।
प्रिज्माले तलको भिडियोमा ४० मिनेटमा हेर्नुहोस् ।
Prevसाताको पहिलो दिन ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य..
Nextसबै तरकारी मध्ये संसारको सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइदा गर्ने तरकारी स्कुसको बारे जानौं
“राजा आउ देश बचाऊ” भन्दै धामी र माताहरुले देखाए यस्तो चर्ति;कला- हेर्नुहोस (भिडियो सहित
नेपालमा माघ १४ बाट कोʼ रोना खोप लगाइने, पहिलो चरणमा को-को पʼर्नेछन् ?
अ,ण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखा, नुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ यस्तो खतरा !